Af hayeenka Baarlamaanka Oo kahadlay Dilkii Loogeesday Raxma Maxamed C/qaadir – STAR FM SOMALIA
Gudoomiyaha Baarlamaanka Somaliya, Prof. Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari, ayaa ka tacsiyadeeyay dilkii maanta Magaalada Muqdisho loogu gaystay Allaha u naxariistee Raxma Maxamed C/qaadir.
Gudoomiyaha, ayaa waxa uu ummada Somaliyeed iyo qoyskeedaba uu kaga tacsiyadeeyay geerida ku timid marxuumadda, gadaasheedana aanu Alle fidneenin intii nool.
Raxma waxay ka mid ahayd hablaha Somaliyeed ee sanadihii ugu dambeeyay ka qalin jebiyay Jaamacadaha Magaalada Muqdisho, waxayna shaqo ka heshay Xarunta Golaha Shacabka, oo shaqaalo ay ka ahayd.
Laba nin oo bistoolado ku hubeysnaa, lana socday dhug dhugley/mooto, ayaa ku toogtay afaafka hore ee hoygoodii, xilli ay saakay ku sii jeeday goobteeda shaqo. Dembiilayaasha ayaa ku baxsaday mootadii ay la socdeen, ka dib markii ay dilka ka gaysteen Degmada Wadajir.
Degmooyinka mataanaha ah ee Wadajir & Dhaliinley oo leesku yiraahdo (Madiina), ayaa waxaa ku badan dilalka inta badan Magaalada Muqdisho loogu gaysto Shaqaalaha Dowladda Federalka Somaliya
IGAD oo soo dhoweysay doorashada Axmed Madoobe